IChina ithumele ithimba elizolwisana ne-Ebola | News24
IChina ithumele ithimba elizolwisana ne-Ebola
Beijing – Izwe laseChina liqinisa imizamo yayo ekulwisaneni negciwane le-Ebola njengoba selithumele ezinye izisebenzi zezempilo ezingu-232 eNtshonalanga Afrika.
Abezindaba kuleliya lizwe bathi leli thimba eliyisibalo esikhulu ukuthunyelwa yiChina kwelinye izwe, elizosuka ngoLwesibili, linabangu-154 abazothunyelwa eLiberia nabangu-78 abazothunyelwa eSierra Leone.
Funda nalolu daba: Siyathembisa isimo kwelaseLiberia naseGuinea nge-Ebola.
Bazoba yingxenye yethimba bazoba nodokotela bamasosha abangu-43 kanye nongoti abangu-35 beChinese Centre for Disease Control okumanje lisebenza eSierra Leone, futhi eselilaphe abantu abangu-61 laqeqesha abangu-1 600 bezempilo.
IChina, engakaze ibike noyedwa owangenwa yileli gciwane, inesipiliyoni ekubhekaneni nezifo ezithelelanayo ezifana neSevere Acute Respiratory Syndrome kanye nomkhuhlane.